Jamaikạ - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Jamaica bu òbòdò àgwè nọ na ime otú-Obodo Karibiyạn. O nor na ímé Osịmịrị Karibiyạn, nleda anyanwu ya bu ébé Cuba nor, na odida anyanwu ya wu ala-elu-mmiri há nạ kpo Hispanyola, ime ala nke bu obodo Hēyítị na Ochichiiwu Dọminícạ. Diạlạ Jamaikạ bu ndi Taíno ndi na su asụsụ Arawak, ha gùrù obodo ha Xaymaca, wuru "Alạ nkú na mmirị", ma o bu "Alạ mmirị jụrụ".
Búrú obodo ndi Spain wẹrẹ ha kpọrọ Santiago, mgbe ogẹ gáfèrè o dafụrụ áká ha, da na ime ochíchí ndi Britain aha ya wuzi 'Jamaica'. Wéré madu rúrú nde 2.8, o bu obodo ató nor na Olile anyanwu Amerika na su asụsụ Inglish wéré madu kacha, Nke ndi mbu bu Njikota Obodo Amerika na Kánada. O nor okpúrụ Eze nwanyi Elizabeth II bu ishi iwu alạ. Kingston bu ama ukwu bu nke kacha ívu na Jamaikạ.
Ala no n'ime Olile Anyanwu Amerikạ
Antigua na Barbuda · Bahamas · Barbados · Belize · Dominika · Dominikan Republik · El Salvador · Grenada · Guatemala · Haiti · Honduras · Jamaikạ · Kánada · Kosta Rika · Kuba · Mézíkọ · Nikaragua · Njikota Obodo Amerika · Panama · Saint Kitts na Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent na Grenadines ·
nke Obodoézè Nà Ofú: Anguilla · Bermuda · British Virgin Islands · Kayman Islands · Montserrat · Turks na Kaikos Islands
nke France: Guadeloupe · Martinique · Klipperton Island · Saint Barthélemy · Saint Martin · Saint Pierre na Miquelon
nke Njikota Obodo Amerika: Navassa Island · Puerto Rico · United States Virgin Islands
nke Netherlands: Bonaire · Saba · Sint Eustatius · Aruba · Curaçao · Sint Maarten
nke Kolombia: San Andrés na Providencia
nke Denmark: Greenland
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamaikạ&oldid=61081
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 2 Ọnwa iri 2017, mgbe 17:53